Gọvanọ Finitiri: ọnọdụ ụmụnwaanyị | odumblog
Gọvanọ Finitiri: ọnọdụ ụmụnwaanyị
posted on Jun. 19, 2019 at 9:06 pm
Gọvanọ Adamawa Steeti bụ Ahmadu Finitiri ekwuputala n’ezie na ụmụnwanyị ga-arụ ọrụ pụrụ iche n’okpuru ọchịchị ya. O kwuru na ohere a o wepụtara ụmụnwanyị na gọọmentị kaara ha mma karia ịnọ n’ime ụlọ nke ọzọ na n’usekwu.
Gọvanọ mere nkwuputa a mgbe ọ nabatara ụmụnwanyị na otu ndi ọzọ ka ha biara ibunye ya ụkpa ekele n’ụbọchị Sallah. N’imezu ihe o kwuru, o kwere ha nkwa na nwanyi ka ọ ga-eme onyeisi ministiri na-ahụ maka ụmụnwanyị na Steeti. Ụdị nkwa o kwere bụ ihe gọọmentị chịburu n’Adamawa na-emeghi.
O kwere mmadu niile nkwa na gọọmenti ya ga-agbali otu o kwesịrị iji hụ na ihe niile a ga-eme na Steeti bụ maka ọdịmma onye ọ bụla. N’igosi nke a, ọ kwụrụ ndi e ji ụgwọ ọnwa Eprel na Mee ego rutụrụ ha.
odumblog June 19, 2019
Gọọmentị Abia Steeti akwụsị mgbatị ọrụ
Ntuliaka UN: Mohammad-Bande abụrụla onyeisi UNGA